Sekuyisikhathi eside iningi izivakashi ezivela e-Europe, i-ozithandayo kakhulu resort Turkish of Kemer. Goynuk - kule ndawo, elise 7 km kusuka umakhelwane walo ethandwa kakhudlwana, futhi 45 km kusuka Antalya. Le ndawo yaziwa ngoba emakhulwini amaningi eminyaka, ngoba lapha labetibambile indlela waseLibya, okuyinto owashadisa emzini wamaqhawe lasendulo. Izivakashi ibhizinisi edolobhaneni eyaqala ukuvela 90 sekwephuzile kwekhulu elidlule, kwaba khona-ke ezakhiwa nge amahhotela inkanyezi ezahlukene ukuthi ukuhlangabezana namazinga omhlaba. Umendo ezisuka Goynuk ukuba Antalya futhi Kemer ukusondela ngomfutho ukuthandwa resort entsha. Akukhona nje abaseTurkey, kodwa futhi izivakashi zakwamanye amazwe lapha ukuze uphumule.
ingqalasizinda athuthukisiwe, ukuzijabulisa eziningi edonsela Kemer. Goynuk - yokungcebeleka ethulile, kukhona ethokomele nokuzwakala imibhangqwana eshadile nezingane, abadala nalabo izivakashi abazimisele ngeke ukushintshanisa endaweni enomsindo ukuba ukuthula nokuzola endaweni yemvelo. Leli dolobhana ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: yokungcebeleka futhi zokuhlala. Ingxenye yokuqala egxile wonke amahhotela, phakathi kwawo kakhulu aphambili, nakuba zikhona 3 no-4 "izinkanyezi". Wonke umuntu angaba pick up uhlalwe, sakhela phezu kwabo izintandokazi siqu futhi isabelomali.
Intsha, ukuzilibazisa Kemer ofanelekayo. Goynuk Nokho futhi abakwazi ukuqhosha nengqalasizinda evuthiwe, kodwa ngisho lapha kukhona okuthile ukwenza izivakashi yonke into eziyibonayo. Leli dolobhana Ubuye ezikhangayo ezifana Mount Tahtali, ungase futhi ukuya emzini Phaselis lasendulo. Lapha umuntu angabona eziningi izakhiwo ezithakazelisayo: LamaRoma Baths, emathuneni idolobha kanye endaweni, kunomsele, yaseshashalazini. Ngokwale ndaba, phambi komuzi kwaba omunye eziyinxanxathela eyinhloko Lycia.
Abanye amaholide ku nendawo ebukeka ngezindlela ezihlukahlukene akuyona wanelisa Kemer. Idolobhana Goynuk uvakashele ngisho nabahambi zokungcebeleka eseduze ethandwa. ukunakwa Omkhulu edonsela entabeni Tahtali, ukuphakama okuyinto 2365 m. Kungenzeka ukukhuphuka ke kuphela, kodwa ungasebenzisa imoto ikhebula. Kusukela isiqongo izipesheli elimangalisa isibuyekezo kusukela Finike UHLANGOTHI. Tahtalı ngokuvamile buthelela emhlabeni ifu, uhlinzeka emehlweni ajabulisayo.
Ezindaweni eziningi ezinhle kungaba evulekile for izivakashi Kemer. Goynuk futhi ahlale abalamacala lezihambi, ungavakashela indawo olunothile kakhulu - Paradise Bay. Zonke ngasogwini ayahlakazeka emikhulu enamadwala, lapho zibangelwa ulwandle ukulwa umhlaba. Bay khona esiphawulekayo nezilwanyana ezincane ezingabonakali emanzini, kokuba ukukhazimula esithambile.
Ukuze ukuyothenga sina kungcono ukuya Kemer. Göynük (imikhiqizo isithombe emakethe kubangele nesifiso sokufuna ukuba uwuthenge) futhi has a lot of ezitolo, izitolo ezincane. Lapha ungakwazi ukuthenga ubucwebe, lesikhumba, izinongo, amaswidi. Kunezinhlobo ezihlukahlukene imikhiqizo ezinkulu, kodwa ngamanani aphansi akubalwa. Abahwebi baqonde isiRashiya, futhi kwamukeleka ukukhuluma, ngakho izinkinga zokuxhumana kuphakama. Ukuze iholidi beach e Göynük Kunconywa ukuya esikhathini kusuka May kuya ku-October. Ngokusho izimo zezulu komnikazi kuyafana Kemer.
Botkin umzila eCrimea: incazelo umzila, ubude, isithombe
Izimoto ze-Ford - zonke izinhlobo: incazelo, imininingwane, ukubuyekezwa
I-Rothenburg ob der Tauber: ezikhangayo nendawo ebalazweni laseJalimane